सार्वजनिक यातायात खुलाउने तयारी: यात्रुले स्यानिटाइजर बोक्नुपर्ने, मास्क लगाउनै पर्ने ! – Online Nepal Site
धादिङबाट काठमाडौं आउँदै गरेको साधन पल्टियो – राजधानी भित्रने र बाहिरिने सवारी अस्तब्यस्त
रोनाल्डोले फेरी किने विश्वकै महंगो कार, मुल्य थाहा पाएर उड्नेछ होस्
मनोज गजुरेलको भयो बिहे, यी हुन् उनकी नयाँ बेहुली
दशैँका लागि गाउँतर्फ जादै गरेको जिप दुर्घटना : तीन जनाको मृत्यु, पुरै गाउँ शोकमा
मेरी बिरामी छोरिलाई पि,ट्ने चि,मोट्ने डाक्टर नर्स हैनन नरपि,चास हुन भन्दै आ,क्रोशित भए जय किशन बस्नेत-भिडियो सहित
शाहरुखका छोरा आर्यन हुन् ‘विवादका राजा’ यसअघि उनि पहिले पनि केटी संग यस्तो अबस्थामा भेटिएका थिए !
काठमाडौमा बढ्यो यति धेरै सार्वजनिक गाडी भाडा, ३५ रुपैया सम्म तिर्नुपर्ने
टिकटकबाट करोडौं कमाए भन्नेहरुको वास्तविकता बाहिरियो । बिजय शाही जस्तै दुनियाँ झुक्याउन खोजेका हुन त ? (भिडियो हेर्नुस)
मुख्य पृष्ठ /News/सार्वजनिक यातायात खुलाउने तयारी: यात्रुले स्यानिटाइजर बोक्नुपर्ने, मास्क लगाउनै पर्ने !
सार्वजनिक यातायात खुलाउने तयारी: यात्रुले स्यानिटाइजर बोक्नुपर्ने, मास्क लगाउनै पर्ने !
4082minutes read
काठमाडौँ – सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएर जनजीवन सहज बनाउने तयारी गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न नयाँ निर्देशिका बनाएको छ । विभागले सार्वजनिक यातायातमा यात्रु सुरक्षित राख्न र जिम्मेवार बनाउन सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न नयाँ निर्देशिका बनाएको हो।
महिलाको मुखबाट यस्ता कुरा सुन्दा मख्ख पर्छन् पुरुषहरु !
जेठ २५, २०७७ST
सम्बकन्धलाई दिगो बनाई राख्न र प्रगाड बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाई पार्टनरका चाहना पनि बुझ्नु जरुरी छ । महिला या पुरुष दुवै आफ्नो पार्टनरबाट प्रशंसा सुन्न चाहन्छन् । खासगरी उनीहरुको लुक, पहिरन, काम, पेशा वा अन्य चिजको विषयलाई लिएर उनीहरु प्रशंसा सुन्न चाहन्छन् । एक अर्काको प्रशंसाले आत्म विश्वास बढाइदिन्छ भने आपसी समझदारी पनि बढ्छ । तर प्रशंसा गर्दा घमण्ड नपलाउने गरी गर्नु पर्छ । सामान्यतया महिलाले पुरुषबाट प्रशंसा सुन्न चाहन्छन् भनिन्छ । तर पुरुषहरुमा पनि यो चनाहा हुन्छ कि आफ्नो पार्टनरले प्रशंसा गरोस् । यस्ता छन् पुरुषले सुन्न चाहने ६ प्रशंसाः
१ तिमीलाई हसाउँन आउँछ
पुरुषहरु पार्टनरले आफूलाई मनोरञ्जन प्रदायक ठानोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले पुरुषहरु आफूसँग भएकी महिलालाई खुसी राख्न हरसम्भव प्रयास गर्छन् । सेन्स अफ ह्युमर अर्थात हसाउँने कला भएका केटा केटीहरुलाई मन पर्छ । तर केटाहरु पनि केटीहरुले तिम्रो सेन्स अफ ह्युमर राम्रो छ भनेको सुन्न लालायित हुन्छन् ।
२ सपनाको राजकुमार
महिलाहरुले आफ्नो बारेमा के सोंच्छन् भन्ने विषयमा पुरुषलाई सँधै चासो हुन्छ । कुनै पनि पुरुषले म कस्तो लाग्छु भनेर सोध्यो भने जहिले पनि प्रशंसापूर्ण जवाफ दिनुस् । तपाइँलाई उ सँग बस्दा सुरक्षित महसुस् हुन्छ वा माया लाग्छ भने यी कुरा खुलेर भन्नुस् । पुरुषलाई लागोस् म सपनाको राजकुमार नै हो ।
३ शारीरिक बनौट वा सामानको प्रशंसा
पुरुषहरुलाई आफ्नो शरीरको सुगठनबारे प्रशंसा सुन्न मन पर्छ । कुनै पनि महिलाले आफ्नो हेयर स्टाइल वा पहिरन मात्र होइन शरीरको बनोटको विषयमा सामान्य प्रशंसा गरिन् भने पुरुषहरु घाइते हुन्छन् । पुरुषहरुलाई उनीहरुले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरु चस्मा होस् वा वाइक जस्ता कुराको प्रसंसा पनि सुन्न मन पर्छ ।
४ यो कुरामा तिमी उत्कृष्ठ
पुरुषलाई केटीहरुले तिमी यो कुरामा उत्कृष्ठ छौं भनेको सुन्न मन पर्छ । यदि तपाइँको ब्वाइ फ्रेण्ड वा पति कुनै काममा राम्रो दक्षता राख्छन् भने उनलाई प्रशंसा गरि हाल्नुस् । खाना बनाएको होस् वा गाडी चलाएको कुरा । गीत गाउने कुरा होस् वा सफाइको ।
५ मनका कुरा गर्नुस्
राम्रो पार्टनर त्यो हो जस्ले सुख र दुख दुवैमा साथ दिन्छ । यदि तपाइँको पार्टनर पनि यस्तो छ भने उसलाई प्रशंसा गर्न नभुल्नुस् । धन्यवाद र कृतज्ञताको मौका चुकाउनु हुँदैन । मनका कुरा खुलेर गर्दा आपसी विश्वास बढ्छ र सम्बन्ध कँसिलो हुन्छ ।
६ सहजताको अनुभव
महिलाहरु आफ्नो पार्टनरसँग रोमान्सको समयमा केही हिचकिचाउँछन् । बरु परपुरुषसँग रोमान्स गर्ने तर आफ्नै पार्टनरसँग खुल्न नचहने महिलाको बानी राम्रो होइन् । आफ्नो पति वा प्रेमीसँग खुलेर रोमान्स गर्दा पुरुषलाई पनि खुसी तुल्याउन सकिन्छ भने प्रेम पनि बढ्छ । एक पटक प्रयोग गरेर त हेर्नुस् ।
थप १८ जनामा कोरोना संक्रमण‚ संक्रमितको संख्या १४७८ पुग्यो
एकै झड्कामा आगनमा खेलिरहेका ४ बच्चाको मृत्युपछि बन्ध्याकरण उल्ट्याएर भाग्यलक्ष्मीले जन्माइन् तीन सन्तान
भाग्यले बाँचेको परिवार : १ मिनेट छिटो भाग्दा ७ जनाको ज्यान जोगियो
प्रशासनको फेरि यस्तो आयो निर्णय : भोलिदेखि सवारी साधन पनि सञ्चालन गर्ने दिने, के छ मापदण्ड ?
आजको विदेशी मुद्राको भाउ हेर्नुहोस् कुन देशको कति ?